अश्लेषा अब कता ? - मनोरञ्जन - नेपाल
अश्लेषा अब कता ?
प्रेमगीतबाट पूजा शर्माले तारिफ बटुलिन् तर प्रेमगीत २ मा पूजालाई ‘रिप्लेस’ गरिन्, अश्लेषा ठकुरीले । यत्ति भएपछि के चाहियो, अश्लेषा सबैको नजरमा परिहालिन् । आक्रामक प्रचारप्रसारका बीच प्रेमगीत २ प्रदर्शन भयो । प्रमोसनका क्रममा उनी आफैँ ‘मार्डरोव मालफंक्सन’को विवादमा परिन् । धन्न ! फिल्मले नेपालबाट करिब–करिब लगानी उठायो । यसको मतलब अश्लेषाको करिअरले गति लिनुपर्ने हो । तर, कहाँ त्यस्तो हुनु र ? प्रेमगीत २ प्रदर्शन भएको पाँच महिना बितिसक्यो, अश्लेषा अर्को फिल्ममा अनुबन्ध भएको खबर सुनिएको छैन । जबकि, उनीसँगै स्क्रिन सेयर गरेका हिरो प्रदीप खड्काले लिलीबिलीको सुटिङ भ्याइसके । अन्य फिल्मबाट पनि अफरको ओइरो छ । तर, अश्लेषाचाहिँ बिस्तारै ओझेलमा परेको आभास हुन थालेको छ ।